Izinsiza Ezingu-10 + Ezingcono Zokusakazwa Kwe-TV Ngo-2020 - Ezokuzijabulisa
Ukusakaza kungenye yokuzijabulisa okuhle kakhulu esikhathini sanamuhla, sekukhona kufakwe amabhokisi we-set-top nawo wonke lawo makhebuli amakhulu iyasebenza kepha manje udinga kuphela idivaysi encane, futhi usukulungele ukuhamba, futhi iphephe kakhudlwana futhi izokunikeza okuqukethwe okukhethiwe othanda ukukubuka.
Ngakho-ke, sikulungiselele uhlu olunemininingwane yokuthi usho ezinye zezinsizakalo ezihamba phambili ze-TV. Ngakho-ke manje ake sifike ohlwini lwezinsizakalo zokusakazwa kwe-TV ezihamba phambili.
Izinsizakalo ezihamba phambili zokusakazwa kwe-TV ngo-2020 - Uhlu oluphezulu
Ubonile lo eza. Le yisevisi yokusakaza ehamba phambili etholakalayo njengamanje. Izinkokhiso zanyanga zonke ziphansi kakhulu uma ziqhathaniswa nezinye izimbangi zayo. Okuhle kakhulu ngale nsizakalo ukuthi ikukhombisa okuqukethwe okuthandayo ngama-algorithms owanikeza wona. Omunye wemibukiso emihle kakhulu efana neBreaking Bad enesilinganiso se-IMDB esingu-9.5, Izinto eziyinqaba ezinesilinganiso se-IMDB esingu-8.8, iMindhunter enesilinganiso se-IMDB esingu-8.6. Yonke le mibukiso emnandi ikhona kuNetflix yokusakazwa.
Uzokwazi ukufinyelela kule nsizakalo nge-android, android tv, nakuMac / iOS / Apple tv. INetflix izokuzuzela isenti ngalinye. Futhi, okwangempela kwabo kungomunye wemibukiso emihle kakhulu eyake yenziwa. Abaningi babo bathole ama-Golden Globe Awards. INetflix ifana nokuba nekhwalithi ngaphezu kobuningi. Inani cha. yeziqu kanye ama-movie nemibukiso ingu-5,665.
Nakhu ukuwohloka kohlelo lwamanani eNetflix:
Uhlelo oluyisisekelongesikrini esisodwa:$ 9.
Uhlelo olujwayelekilengezikrini ezimbili:$ 13.
Uhlelo Lokuqalangezikrini ezine:$ 16.
Lokhu kusehlangothini lobuningi futhi kunikeza ukukhetha okuningi kwe-TV Shows. Ingenye yabancintisana kakhulu neNetflix. Inendlela ehlukile maqondana nokuqukethwe 'okukhethiwe'; ihlunga okuqukethwe ngezilinganiso ze-IMDB futhi isuselwa kuzimo zakho zemizwa. Ake ngichaze ukuthi injani imoods enjengaleyo, ejabule, edabukisayo, efuna isenzo esithile, isasasa, ungathola okuqukethwe kususelwa kumzwelo wakho.
Kunezinketho eziningi kule nsizakalo yokusakaza futhi. Noma kunjalo, ungahle ungababoni benelisa njengeNetflix. Intengo iphansi, kanti ezinye zezihloko zayo ezinhle kakhulu ukukalwa kwe-Family man IMDB engu-8.6, iPetal Look enesilinganiso se-IMDB esingu-7.8, iMirzapur enesilinganiso se-IMDB esingu-8.5, esikaTom Clancy sika: Jack Rayan esilinganisweni se-IMDB esingu-8.5. Inani cha. yezihloko ku-Amazon Prime Video ingama-20,392.
Okubhaliselwe konyaka kubiza ama-Amazon Prime video ngama- $ 99.
3. I-Disney +
Uthandwe ama-Disney movie esemncane? Le inketho ephelele. Le sevisi ifaka yonke imovie yeDisney. Kusukela ku-Snow White kuya kuma-Avengers, akunamkhawulo kokuqukethwe okunikezwa yi-Disney. Okuwukuphela kwento embi ngayo ukuthi kungahle kube nemibukiso embalwa kakhulu noma ama-movie okungenzeka awukaze uwabuke. Lokhu kufana nokuhamba okujulile phansi komugqa wememori.
Kodwa-ke, njengoba iDisney yintsha, basazama ukuletha ezinye izihloko ezinye zeziqu zabo zifaka iMandalorian enesilinganiso se-IMDB esingu-8.7, i-Avengers Endgame IMDB engu-8.4, iToy Story-3 IMDB isilinganiso esingu-8.3. Inani eliphelele lezihloko ezikhona yiziqephu ezingama-7000 nama-movie angama-500.
Uhlelo lweDisney + lubiza u- $ 69.99 ngonyaka.
4. I-HBO Max
I-HBO igxile kakhulu kokuqukethwe okusobala nabantu abathanda okuhlukile. Izihloko ezihamba phambili kule sevisi yokusakazwa yi-Game Of thrones IMDB isilinganiso esingu-9.3, isilinganiso se-Chernobyl IMDB esingu-9.4, Isilinganiso se-IMD ye-Watchmen sika-8.1, isilinganiso se-Westworld IMDB esingu-8.7. Okuqukethwe kuhle impela, kepha hhayi wonke umuntu uyakuthanda. Kodwa-ke, ungahle uthande ukuzama inhlanhla yakho futhi ubone ukuthi ingabe iyahambisana yini nokunambitheka kwakho.
I-Justice League elindelwe kakhulu izokhonjiswa ku-HBO max kuleli hlobo ukuze izinto zibonakale zithembisa i-HBO. Inani eliphelele leziqu lingu-2000.
Izinhlelo ze-HBO zibiza u- $ 142.8 / ngonyaka.
Yonke imibukiso isuselwe esikweni laseMelika, kepha ineminye imibukiso emihle eveza umhubhe wayo. Amanye awo iBrooklyn ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye isilinganiso se-IMDB se-IMDB 8.4, Lesi Isilinganiso se-IM IMDB se-IMDB: 8.7, isilinganiso seGrey’s Anatomy IMDB se-IMDB: 7.6. Lokhu kukhombisa ukuthi ungahle ungafuni ukuphuthelwa yikho. Kodwa-ke, le yiminye imibukiso ongayibuka ngokunganaki futhi ungafuni ulayini lwendaba oluhehayo.
Kufana ne-HBO, ungazama inhlanhla yakho nokuqukethwe ongakuthanda noma ongakuthandi. Uma ungumlandeli ka-Aron Paul, ungayithanda le nsizakalo; ngaphandle kwalokho, ayikwazi ukuzimela. Isibalo samatayitela akhona singaphezu kwama-43,000 (njengoba kusho).
Intengo yeHulu ingu- $ 71.88 / ngonyaka.
I-Flash, Umcibisholo Ohlaza, Umbani Omnyama. Yebo, lena isevisi yokusakaza ehamba phambili kuwe. Onke ama-DC Heroes afakiwe kule phakethe. Iningi labo lithole ukubhuza okuzungeze idolobha ngokuletha amaqhawe ompilo.
Okubaluleke kakhulu, kumahhala ukubukela akukho okubhaliselwe noma ikheli le-imeyili elidingekayo.Uma ufuna ukuhlola i-geek yangaphakathi yakho, kufanele uzame i-CW. Inani lezihloko ezikhona zingama-30.
Izindleko zokubhaliselwe:I-CW ayinazindleko.
7. I-Apple TV +
I-Apple tv + ineqoqo elihle lemibukiso nama-movie. Kukhombisa njengo-Bona ngesilinganiso se-IMDB esingu-7.6, Isilinganiso se-Morning Show IMDB esingu-8.4, isilinganiso se-Ted Lasso IMDB esingu-8.7. Kuqukethe yomibili imibukiso ebamba ingqondo yakho isikhathi eside futhi ikhombisa okuyizinto zokubuka okungajwayelekile.
Njengoba zintsha emakethe, zinenani elilinganiselwe lemibukiso ezingayinikeza, kepha futhi zinekhwalithi. I-cinematography ingenye yezinto ezinhle kakhulu uma iqhathaniswa nezinye izimbangi zayo. Inani eliphelele leziqu zingama-45.
Unyaka wokuqala umahhala ngokubhaliswa komndeni, noma ungakhetha ukungena kokunikezwa kwabafundi futhi ukufune mahhala ngomculo we-apula ngo- $ 0.61 / ngenyanga nje.
I-Anime uhlobo olulodwa olubonwe yiwo wonke umuntu. Dragon ball z wezwa ngalokhu? Cabanga u-ode ukudla kanye ne-binging anime ngokunethezeka kwekhaya lakho. Leli phupho lingagcwaliseka ngeCrunchyroll. Le webhusayithi ineqoqo elikhulu kakhulu le-anime okufanele linikele.
Kusuka kuNaruto kuye ekufeni, wonke ama-anime ongawacabanga azobe ekhona kulabhulali yawo. Kufanele ucabangele ukubuka i-anime. Kungumhlaba omusha ngokuphelele wokuzijabulisa ongasetshenziswanga. Inani eliphelele lezihloko okwamanje lingu-1000 +.
ICrunchyroll imahhala ngokuphelele ngezikhangiso, kepha ungakhokha u- $ 7.99 / ngenyanga ukukhetha ukuphuma ezikhangisweni.
Uma uthanda imibukiso yezinkulumo, leli yipulatifomu elingcono kunombukiso wanamuhla noJimmy Fallon onesilinganiso se-IMDB esingu-7.3. Wonke umuntu uyayithanda imibukiso yezinkulumo nokunye okuqukethwe okungajwayelekile, okungadingi ukuthi silule futhi sigobise izingqondo zethu. Isikhathi sokuphumula nomndeni singajatshulelwa ngePigogo.
Kuzofanele ukhethe inketho ye-premium ngoba ngeke bayeke ukudubula izikhangiso kusikrini sakho njalo ngemizuzu emihlanu. Inani eliphelele lezihloko ozitholayo lingu-60 +.
Intengo yePeacock MAHHALA ngezikhangiso, kepha ungakhokha u- $ 100 / ngonyaka uma ufisa ukuzwa ukusakazwa okungenazikhangiso.
10. I-YouTube Premium / TV
Amavidiyo we-YouTube kanye ne okuqukethwe kwe-premium kwe-YouTube . I-YouTube futhi inemibukiso nezinhlobonhlobo ezahlukahlukene ezikhethekile kubo. Kepha kunesizathu sokuthi lokhu kubekwe phansi kakhulu ohlwini lwethu. Kungenxa yokuthi izinga lokuphepha liphansi kakhulu, futhi abantu abakutholi okuqukethwe okuhlaba umxhwele impela.
Ungahle uthande ukungasisebenzeli lesi sivumelwano. Kodwa-ke, ungajabulela izihloko ezinjengeCobra Kai enesilinganiso se-IMDB esingu-8.7, Step Up Highwater esilinganisweni se-IMDB esingu-7.5. Kepha nezihloko ezinjengalezi manje sezijwayelene neNetflix.
Inesivivinyo senyanga eyodwa samahhala. Kubiza u- $ 11.99 / ngenyanga.
Ngiyethemba uthole umbono ocacile wezinsizakalo zokusakaza ezihamba phambili ngokufunda okuthunyelwe kwethu. Inketho ehamba phambili kuzoba ukukhetha ukungena kwi-Amazon Prime Video noma i-Netflix njengoba ikhwalithi eyodwa, kanti enye ingubuningi. Akukho ukulahleka, ngoba bobabili beza ezingeni eliphakathi nendawo lapho kuthintwa izindleko. Uma unezinye iziphakamiso noma izengezo kulolu hlu bese uziphonsa ebhokisini lokuphawula.
Ama-movie amahle kakhulu wokubuka
Izindawo Zamahhala Zokusakaza kwe-Movie (2020)
Imibukiso Engcono Kakhulu ye-Anime ku-Netflix - Kumele Ubuke
Uhlelo lokusebenza lwe-android lwe-youtube ku-mp3
ungayilanda kanjani imibukiso ye-netflix ku-macbook
izinketho ngaphandle kwekhebula tv
imidlalo evuliwe yamahhala amasayithi we-google
amasayithi wokusakaza bukhoma wezemidlalo mahhala
bukela ama-movie wamahhala amafilimu aku-inthanethi